Usuku: 9 November 2019
Ku-2012, nge-Law No. 6360, imingcele yendawo eseduze yandiswa futhi isibalo sezifunda ezikule ndawo eseduze sanda kusuka ku-16 saya kwi-25. Yize inani labantu besifundazwe se-Ankara lenyuka nge-2013 phakathi kweminyaka ye-2018-9, ibhasi le-EGO [Okuningi ...]
UMongameli Aktaş Kahraman unikeze umshayeli uNuri Acar
UMongameli Aktaş Kahraman unikeze umshayeli; IMeya yaseBursa u-Alinur Aktaş, ngesikhathi besemabhasini emlilweni bonke abagibeli begcwele igazi elinamakhaza ukuze baphume ngobunono, bedlula phambi kwenhlekelele okungenzeka [Okuningi ...]
To the Attended of Repidates Reposed to TCDD Taşımacılık A.Ş. Amadokhumenti aceliwe kubafundi abaqokwe ngokusobala ezikhundleni ze-TCDD Taşımacılık A.Ş. ngaphansi kwesibalo se-Social Services Law No. 2828 wethulwe ngezansi ukuze uthole imininingwane. [Okuningi ...]
I-TCDD Transport isisayine i-Protocol for Transports on Trans-Caspian Route; Ngesikhathi kuqhubeka umcimbi wokuthumela iChina Railway Express, isitimela sokuqala sezimpahla esizosuka eChina siye eYurophu sisebenzisa iMarmaray, "Isizukulwane esisodwa" [Okuningi ...]
Isicelo sokugcina seGreen Flash eSamsun
E-Samsun, ikakhulukazi emigwaqweni eyinhloko kanye nokuhlangana kwe-boulevard, abashayeli, befaka ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka egameni lesexwayiso sokumisa ukukhanya okubomvu kunqanyulwe 'GREEN FLASH' APPLICATION END! ISusun Metropolitan kuMnyango wezokuThutha kaMasipala [Okuningi ...]
Inani Labagibeli Abathwalwa nguTram e-İzmir Ifinyelela 50 Million
Isibalo sabagibeli abathuthwa ngethilamu e-İzmir sifinyelele ku-50 million. Karşıyaka futhi uKonak tramways afinyelela abagibeli abayizinkulungwane ze-120 ngosuku. Inani labagibeli abathuthwa ngugamu, enye yezinsika ezibalulekile zezithuthi zomphakathi ezihamba İzmir [Okuningi ...]
I-General Directorate ye-IETT ne-LÖSEV bahlele umhlangano wezingane ngeSonto Leukemia ”mayelana ne-leukemia. Ngaphezu kwalokho, abaphathi nabasebenzi abagqoke imaski banikeze umyalezo wokuqwashisa. I-leukemia yindlela yokwelapha evimbela i-leukemia. [Okuningi ...]